Vondrona Izany KA MAlagasy -Mba hipaka hatrany amin’ny foto-pisainana, ny teny, ny atao ary ny fihetsika rehetra ny maha-Malagasy – Blaogin'i Voniary
Hanatanteraka lanonana fifampiarahabana 2019 ny Izany kA MAlagasy ny Sabotsy 16 Martsa ho avy izao, manomboka amin’ny 11 ora eny amin’ny Cafétéria ESCA Antanimena. Vondrona iray ao amin’ny Facebook manandratra ny maha-Malagasy ary ho feno dimy taona amin’ity taona ity no niforonany. Hetsika miavaka no ampanatenain’ny mpikarakara amin’ny fankalazana izany ary santatra am-bavarano ihany ity amin’ny Sabotsy ity. Ndeha ary hofantarintsika ao anatin’ity antsafa ity ny vondrona sy hetsika hotanterahiny.
Inona moa ny Izany Ka Malagasy ?
Ny Izany ka Malagasy na afohezina hoe IKAMA dia vondrona iray ao amin’ny Facebook niforona tamin’ny 15 Novambra 2014. Vondrona manaja ny teny Malagasy sady tena sarotiny mihitsy ny IKAMA. Izany hoe miezaka manoratra amin’ny teny Malagasy madio rano ny ao anatin’ny vondrona ary manitsy hatrany raha sendra misy mandiso. Fadiana mihitsy ny manao teny vary amin’ny vato saingy raha misy teny vahiny tsy voadika amin’ny teny Malagasy dia atao anaty farango sosona. Mivoy ny maha-Malagasy amin’ny lafiny rehetra ihany koa ny vondrona: fomba, fiteny, riba sy soatoavina, tantara, haisoratra, hira sy ny hafa.
Fanorona sy katro anisan’ireo kilalao Malagasy
Ankehitriny, miisa 15345 ny mpiray vondrona ary mahenika izao tontolo izao. Misy ny komity mpandrindra maromaro izay tarihin’ny Raiamandreny Daniel Andriamizaho na fantatry ny rehetra amin’ny anarana hoe Rainibozy.
Inona ny mampiavaka ny IKAMA miohatra amin’ny vondrona hafa ao amin’ny Facebook ?
Raha vao mikasa ny hikambana ao amin’ny vondrona fotsiny ianao dia misy fanontaniana sivana mba afahanao miditra ao. « Ezahinay mihitsy ny tsy ampiditra ireny kaonty fako ireny ! » Hoy Magie Gam, anisan’ireo mpandrindra ny vondrona. Ny anton’izany dia ny mba hitazonana ny maha-izy azy ny IKAMA. Noho izany, malalaka ny fanehoan-kevitra ao amin’ny vondrona fa atao am-panajana. Hatreto dia mbola tsy nisy izany hoe nihoa-pefy izany na nifanasa vangy teo amin’ny samy mpikambana.
Ny mampiavaka azy koa dia tsy mijanona amin’ny serasera an-jotra fotsiny ny mpikambana fa misy fihaonana mivantana hatrany. Izany indrindra no anatanterahana io fifampiarahabana nahatratrany ny taona 2019 io.
Mba lazalazao fohifohy àry ny momba io hetsika voalohany hotanterahinareo amin’ity taona 2019 ity io !
Tanjon’ny mpikarakara ny hampihaona mivantana ireo mpiray vondrona sady fanomanana ny fankalazana ny faha-dimy taona ihany koa io. Ny olona rehetra : ireo havana ary tapaka sy namana no asaina amin’io fotoana io. Amin’ny maha lanonana azy dia fialam-boly no hameno ny fotoana saingy tsy mivoana amin’ny maha-Malagasy hatrany toy ny kabary, tononkalo, hainteny, dihy, hira, hatsikana ary fifaninanana kilalaon-tsaina izay izarana mari-pahatsiarovana ho an’ny mpandray anjara. Ny sakafo ifampizarana moa tsy adino, indrindra ny koba Malagasy.
Fifampiarahabana 2019 IZANY KA MALAGASY – SABOTSY 16 Martsa 2019 – Cafétéria ESCA ANTANIMENA – 11 ora – 0325614092 – 0349597988.
Fanentanana àry !
Zava-dehibe ny mirehareha amin’ny maha-Malagasy, izany no antony imatimatesanay hatrany amin’ny fanandratana ny maha-Malagasy ! Ny fanirianay dia ny mba hipaka any amin’ny Malagasy tsirairay ilay foto-pisainana hoe « Izany Ka Malagasy », izany hoe aseho amin’ny asa sy ny fihetsika rehetra ny faharesen-dahatra hoe Malagasy ianao.
Mba hipaka any amin’ny rehetra ilay foto-pisainana hoe « Izany ka Malagasy »
Koa Manainga ireo rehetra izay mahatsapa tena fa Malagasy mba hanatevin-daharana anay ao amin’ny vondrona.
Manaraka izany, misarika ny Malagasy mba hiverina amin’ireo fomba amam-panao tena Malagasy. Tsy manakana antsika tsy hisokatra amin’ny any ivelany akory izany araka ilay tenin’i Di hoe : « andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko ». Miantso manokana ireo manam-pahalalana momba ny tantara,ny fomba amam-panao, ary ny teny Malagasy ihany koa mba hizara mavitrika ny ao anatin’io vondrona io.
Mankasitraka manokana ny blaogin’i Voniary izay mitondra anjara biriky mavitrika tokoa ao anatin’ny adin’ny serasera amin’izao vaninandro iainantsika izao. Ilaina ny fifanohanana, indrindra aty amin’ny tontolon’ny serasera mba tsy ho resy tosiky ny rivotry ny fanatontoloana isika Malagasy.
facebook malagasy, fomba malagasy, Izany ka Malagasy, maha-malagasy, malagasy, soatoavina malagasy, teny malagasy